Brawl Stars 19.111 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 19.111 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Clan ၏တိုက်ပွဲများ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ multiplayer တိုက်ပွဲများတော်ဝင်ထိပ်တိုက်တွေ့ခြင်းနှင့်သဲသောင်ပြင် Boom ။
သုံးမိနစ်အောက်မှာအတွက်ဂိမ်း Modes သာအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တော်နှင့်အတူစစ်တိုက်။ သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်စူပါစွမ်းရည်နှင့်အတူ Brawlers များစွာ upgrade ။ ထွက်ရပ်နှင့်နယ်ပယ်တွင်ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ထူးခြားတဲ့အရေခွံဝယ်ယူရန်နှင့်စုဆောင်းပါ။ နည်းဗျူဟာမျှဝေအတူတကွစစ်တိုက်ခြင်းငှါတစ်ဦးတီးဝိုင်း join သို့မဟုတ်စတင်ပါ။
MULTIPLE GAME mode မှာ Battle
- ကျောက်မျက်ရတနာဆုပ် (3v3): ရေးအဖွဲ့တက်ထွက်-strategize ဟာပြိုင်ဘက်အသင်းမှ။ စုဆောင်းကိုင်အနိုင်ရ 10 ကျောက်မျက်, ဒါပေမယ့် fragged နှင့်သင့်ကျောက်မျက်ဆုံးရှုံးရ။
- ထိပ်တိုက်တွေ့ (တစ်ကိုယ်တော် / Duo): ရှင်သန်မှုများအတွက်တစ်ဦးကစစ်တိုက် Royale စတိုင်ရန်ပွဲ။ သင့်ရဲ့ Brawler ဘို့ပါဝါ ups စုဆောင်းပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖမ်းပြီးသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တော် play - ပြီးခဲ့သည့် Brawler သေး rowdiest စစ်တိုက် Royale ၌စိုက်နေသည်ကိုလိမ့်မည်။ ဆုရှင်အားလုံးယူပါ!
- Bounty (3v3): ကြယ်ပွဝင်ငွေပြိုင်ဘက်ထွက်ကို ယူ. , ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်ပယ်ကောက်ပါစေပါဘူး။ အများဆုံးကြယ်များနှင့်အတူအဆိုပါကစားသမားပွဲအနိုင်ရရှိ!
- Heist (3v3): သင့်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံကာကွယ်ပါနှင့်သင့်ပြိုင်ဘက်ဖွင့် crack ဖို့ကြိုးစား '' ။ , ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ရန်သူများကိုဘဏ္ဍာကိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင့်ရဲ့လမ်းမှုတ်ဖို့မြေပုံ navigate ။
- ရန်ပွဲ Ball ကို (3v3): ၎င်းသည်တစ်ခုလုံးအသစ်ကရန်ပွဲဂိမ်းပဲ! သင့်ရဲ့ဘောလုံး / ဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြရန်နှင့်အခြားသောအသင်းတော်ရှေ့မှာနှစ်ခုရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်း။ အဘယ်သူမျှမအနီရောင်ကတ်များကိုဒီမှာရှိပါတယ်။
- အထူးဖြစ်ရပ်များ: လီမိတက်အချိန်အထူး PvE နှင့် PvP ဂိမ်း Modes သာ။
BRAWLERS သော့ဖွင့်ပြီး upgrade
စုဆောင်း upgrade Brawlers အမျိုးမျိုး SUPER စွမ်းရည်ဒဏျခတျနှင့်အတူ, ပါဝါအချက်များသူတို့နှင့်အတူထများအဆင့်အတန်းများနှင့်ထူးခြားသောရေခွံကိုစုဆောင်းပါ။
သူတို့ကိုသင်အပေါင်းတို့၏အကြီးမြတ်ဆုံး Brawler နေသက်သေပြရန်အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ဒေသတွင်းဦးဆောင်တက်!
အနာဂတ်၌အသစ်သော Brawlers, အရေခွံ, မြေပုံများ, အထူးဖြစ်ရပ်များနှင့်ဂိမ်းများ Modes သာထွက်သည်ကိုကြည့်ပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! ရန်ပွဲကြယ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။ ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သင်ရန်ပွဲကြယ် play သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
- ကမ်ဘာအနှံ့ကနေကစားသမားဆန့်ကျင် Real-time 3v3 တိုက်ပွဲများအဘို့အရေးအဖွဲ့တက်
- မိုဘိုင်းအတွက်ဖန်ဆင်းတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ multiplayer စစ်တိုက် Royale mode ကို
- တစ်ဦးလက်မှတ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် SUPER စွမ်းရည်နှင့်အတူအသီးအသီး - အသစ်အစွမ်းထက် Brawlers Unlock နှင့်စုဆောင်း
- နေ့စဉ်နယူးဖြစ်ရပ်များနှင့်ဂိမ်းသည် Modes
- တိုက်ပွဲတစ်ကိုယ်တော်သို့မဟုတ် Co-op
- အတူတကွအကြံပေးချက်များနှင့်စစ်တိုက်ဝေမျှဖို့သူချင်းကစားသမားနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကလပ်ကို Join သို့မဟုတ်စတင်ရန်
- သော့ဖွင့်အရေခွံနှင့်အတူ Brawlers Customize
- Player ကို-ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြမြေပုံများမာစတာအသစ်မြေပြင်အနေအထားစိန်ခေါ်ပူဇော်
သငျသညျပြဿနာများရှိခြင်းပါသလား? http://supercell.helpshift.com/a/brawl-stars/ သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်က Settings> အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုသွားသဖြင့်ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
rickydragon စတိုး726.65k
APK ဗားရွင္း 19.111